Iziko lokuhlambela iBlack Centerset eliMnyama kunye neNdibano yeDreyini yeMatte eMnyama
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / I-WOWOW Centerset Igumbi lokuhlambela ngeBhafu yokuhluza ngeNdibano yeNdlu Matte emnyama
WOWOW Centreset Bathroom faucet ene-Drain Assembly Matte Black
Igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela elimnyama 2 izibambo zinika ukusebenza kunye noyilo lwangoku ku-1. Ngewaranti yeminyaka emi-3. Thenga i Bathroom yethu yokuhlambela isuphu matte emnyama 2 izibambo ngoku!
2321400B imiyalelo yokufaka
Igumbi lokuhlambela elinetayile enye emnyama
Iphepha langasese I-Holder yePhepha elinyuswe uMnyama
Igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela elimnyama 2 isibambos 2321400B
Njengabantu abaninzi abakhetha isepha okanye isibhobho sokuhlambela nge-chrome, ungenza ingxelo enkulu yefashoni ngombhobho wamanzi wokuhlambela omnyama. Lo mbala awuniki kuphela igumbi lakho lokuhlambela ngenkangeleko entle nekhethekileyo, umbala omnyama we-matte usacacile kwaye uqhelekile ngokunjalo. Ayisiyongxaki eyenzeka ngamnyama matte ibe ngumbala weklasikhi wangoku xa kufikwa kuyilo lokuhlambela. Umnyama omnyama ngumkhwa ongayi kuqhuma ngokukhawuleza konke konke. Ukugqitywa komnyama omnyama kwibhombu yokuhlambela kunokunika indawo yangoku kuyo nayiphi na indlu yangasese.
Umntu unokuyijongela phantsi into yokuba iipompo zangasese yenye yezona zinto zibalulekileyo nakweyiphi na indawo yokuhlambela ngokubhekisele kwisitayile. Nangona iipompo zangasese zincinci, abantu bathambekele ekugxileni kwiifompo zangasese njengoko ukubona kwabo kutsala ngokuzenzekelayo kwezi ndawo kugxilwe kuzo. Ke ngoko iimpompo zangasese zingenza okanye zaphule nayiphi na indlu yangasese. Iipompo zegumbi lokuhlambela zinako ukuphakamisa igumbi lokuhlambela. Igumbi lokuhlambela elilula okanye elincinci linokufumana ukuphakanyiswa okukhulu ngeepompo zangasese ezinesitayile. Uyilo oluhle lwe-retro yoyilo lwale faucet yangasese WOWOW yenza igumbi lokuhlambela lakho libe nefashoni nangoko. Ibhafu yokuhlambela matte emnyama 2 ephatha i-WOWOW yenye yezi mpompo zangasese ezinokuthi zitshintshe indawo yokuhombisa yakho yangasese.
Matte emnyama igumbi lokuhlambela ngezibambo ezi-2
Isitayile yinto enye, kodwa ukusebenza kunokuba kubaluleke ngakumbi. Kwisiseko semihla ngemihla usebenzisa igumbi lokuhlambela amatyeli aliqela kwaye ufuna igumbi lakho lokuhlambela likukhonze ngendlela exhasa inkqubo yakho yemihla ngemihla. Oko kubalwa ngaphandle kwamathandabuzo kwimisebenzi njengeshawa kunye nebhafu yokuhlambela. Kodwa mhlawumbi usebenzisa isitya sakho sokuhlambela nangaphezulu kwezinye izinto zokuhlambela. Kungenxa yoko le nto kufuneka uchithe ingqalelo engakumbi kule ndawo yokuhlambela kwakho. Ngaphandle kwesinki efanelekileyo yokuhlambela, itephu yokuhlambela iseta yonke imisebenzi oyifunayo.
Indlu yangasese faucet matte emnyama 2 ukuphatha kweWOWOW kuqinisekisa amava amnandi amanzi. Le matte emnyama 4 intshi yokuhlambela ngamanzi inezibambo ezi-2. Ngezi zinto ziphathwayo unokuhlengahlengisa ubushushu bamanzi kunye nesantya ngokungangxamiyo kwiimfuno zakho. Ispout esiphakamileyo sikunika indawo eyoneleyo phakathi kwespout kunye nesinki yakho yokuhlambela ukuze uhlambe izandla kakuhle okanye uhlambe ubuso bakho. Umgama zii-intshi ze-4.4 kwaye unikezela ngendawo eyaneleyo. Ngenxa yoko, awunyanzelekanga ukuba ulwe nendawo enqongopheleyo njengompompo webhafu ongaphantsi.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umbhobho ojikelezayo wombhobho wokuhlambela matte omnyama 2 ophetheyo weWOWOW ubonelela ngokujikeleza kwe-360-degree ukusebenziseka ngokukuko. Isibambo sethumbu sokuhlambela matte emnyama 2 yokubamba iza ne-lift rod drain kwimbala efanayo emnyama emnyama ukwenza ubunye kunye nesinki yakho yokuhlambela. Kulula ngokufanelekileyo ukuyivula kwaye uyivale le ndibano yokuhambisa amanzi ngesiphatho esidityanisiweyo ngasemva kwale mpompo yokuhlambela.
Igumbi lokuhlambela elinenqanaba lokuqala
Ngaphandle koyilo lwangoku kunye nolwesibindi, i-WOWOW yaziwa ikakhulu ngemigangatho yayo ekumgangatho ophezulu. Njengoko ityhala le migangatho yomgangatho ukusuka kwibhodi yokuzoba ukuya kumzi-mveliso wabo we-ultra-modern, zonke iinkcukacha ezincinci zale faucet zilungiselelwe ukuya kuthi ga ngoku. Oko kukunika ipompo yokuhlambela ekumgangatho ophezulu eya kuthi isebenze kakuhle kwaye iqinisekise ukunyamezela ubomi obude.
Umlenze owomeleleyo wendlu yangasese ye-WOWOW yokuhlambela matte emnyama 2 handles yenziwe ngezinto zobhedu eziqinileyo njengoko oku kuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kunye nonyamezelo olude. Ulwakhiwo lwenziwe ngobhedu oluqinileyo kwaye lugqityiwe nge-alloy zinc. Awudingi ukuba nexhala malunga nemicimbi yokubola ngenxa yezi zinto. Ngaphandle koko, le mpompo yokuhlambela ayinasiphelo ukukhusela usapho lwakho ukuya kwelona liphezulu. Uziva umahluko walolu hlobo ngoko nangoko xa ulubambile. Le mibhobho emnyama yokuhlambela matte emnyama 2 isingatha iyamelana namabala ngokunjalo. Ke ngoko kulula ukuyigcina. Yile nto uyifumanayo xa uthenga itompu ephezulu yokuhlambela.
Yezoqoqosho igumbi lokuhlambela ifenitshala emnyama 2 izibambo
I-premium ceramic disc ngaphakathi kwale faucet yombhobho yokuhlambela emnyama emnyama yenza ukuba amanzi ahambe kakuhle kwaye angadriphu. Umphunga wale mpompo yokuhlambela une-aerator yeABS. Ngale nto intsha uza kukwazi ukonga amanzi kunye nokunceda ukugcina amanzi. Ivalve eqinisekisiweyo ye-NSF ijika kakuhle ukukunika intuthuzelo ephezulu. Ikhadibhodi ekumgangatho ophezulu ihlolwe kwimijikelo yamanzi engama-500,000, kwaye ibisaqhuba ngokugqibeleleyo. Kwaye oku ngexabiso elinoqoqosho kodwa!
Njengoko inkqubo yemveliso ye-WOWOW ibekwe emgangathweni kakhulu kwaye izenzekelayo, i-WOWOW inokunika le faucet faucet matte emnyama ibamba 2 ngexabiso elinoqoqosho kakhulu. Ngokudibeneyo nokuthenga okusebenzayo okunexabiso kunye nokusetyenziswa kwezixhobo, i-WOWOW igcina kakhulu kwiindleko zemveliso. Kwaye ngaphandle kokuphulukana nenjongo ephambili yokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngaphandle kwamehlo. I-WOWOW iqinisekisa ukuba awuyi kufumana nayiphi na ipompo yokuhlambela yomgangatho ofanayo ngexabiso eliphantsi kunokuba sikunikezela.
Kulula ukuyifaka kwaye kulula ukuyigcina
Le matte emnyama yeziko lokuhlambela itepu eneziphatho ezi-2 kulula ukuyifaka ngokwakho ngaphandle kwengcali. Ngale ndlela unokugcina nangakumbi ngokufaka le faucet matte emnyama emnyama 2 izibambo ngokwakho. Ibhobho yokuhlambela eyi-4 intshi ilingana nayo nayiphi na intaba emi-3. Isibambo sethumbu lokuhlambela matte emnyama 2 yokubamba iza neseti yezixhobo zokwenza ukufakwa kwesiqwenga sekhekhe, kubandakanya ityhubhu yamanzi, idreyini yokuhambisa intonga kunye nepleyiti yomgangatho wokufaka ngokulula.
Ngebhafu yangasese matte emnyama 2 izibambo ze-WOWOW uyakuqinisekiswa ngombhobho wokuhlambela ongaphezulu kwayo yonke imigangatho yemizi-mveliso. Uyakwazi ukuyigcina ngokulula le faucet yokuhlambela, ngelixa ungasusa intsalela yamanzi anzima ngokuchukumisa iminwe yakho. Njengoko le faucet yokuhlambela kulula ukuyicoca, unokuqhubeka nokusebenzisa le faucet ixesha elide, uqinisekisa imigangatho yamanzi esemgangathweni ophezulu. WOW ayenzelwanga nto ibonelela ngexesha lewaranti leminyaka emi-3 yokuqinisekisa ukusebenza kwebhokisi yayo yokuhlambela matte emnyama 2 handles.
Izibonelelo zegumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela elimnyama 2 ngeziphatho nje:
 Uyilo olwahlukileyo lwe-matte emnyama
 Isikhenkcisi esiphezulu se-arc ukubonelela ngendawo eyaneleyo
 Isporho ngaphandle kwe-spout
 Yenziwe ngezinto zobhedu eziphezulu
I-SKU: 2321400B iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Iziko lokuqubha leepompo zangasese tags: chitha indibano, isibambo emibini, isitya sokucofa isitya
6 x 2.2 x 7.5 intshi
Phakamisa intonga yamanzi
I-WOWOW Soap Dispenser ye-Soap ezenzekelayo